China Soft PVC Fridge Magnets fekitari uye vagadziri | SJJ
Nyoro PVC firiji magineti anogona kuitwa kune ako etsika chimiro mu2D kana 3D. Tsika firiji magineti kwete chete yeimba deco, asi zvakare huru inoshanda yekushambadzira chinhu chekambani.
Mhuri yega yega ine firiji munguva yemazuva ano. Iyo firiji yekunze inzvimbo yekuratidza rudo rwedu uye kuita kuti hupenyu hwako huwedzere kunakidza uye kuve neruvara, nemhando dzakasiyana dzemagineti efriji. Iyo yakapfava PVCFridge Magnetsndizvo zvinhu zvakakodzera kwazvo kuratidza pfungwa dzako nemirau inopenya., uye kuchengetedza firiji yako kukuvadzwa nezvinhu zvakaomarara semagineti esimbi. Iwo magadzirirwo anogona kuve 2D kana 3D ine ruvara rwakazadzwa, Embossed kana makoseti marogo mumhando dzakasiyana. Iwo magineti eSoft PVC efiriji zvakare maturusi akanaka kwazvo ekushambadza mabhureki ako, mazano kana pfungwa, kunyanya mifananidzo yekatuni ndiyo inozivikanwa kwazvo pasirese.
Unogona kuve nemabasa akawanda kubva kune akapfava PVC magineti ane akasiyana akasungirirwa, sekuvhura mabhodhoro, magirazi, mapuratifomu, zvikorekedzo, zvinyorwa zvemabhuku, machena mabhodhi uye nezvimwe zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Zvishandiso zvedu zvine hushamwari uye zvakatipoteredza, zvinogona kusangana nehukama bvunzo zviyero kubva kuUS kana Europe.
Zvinokurudzira: kufa Struck, 2D kana 3D, rimwe chete divi kana maviri mativi
Mavara: anogona kuenderana PMS mavara
Kupedza: mhando dzese dzezvimiro dzinogamuchirwa, marogo anogona kudhindwa, akavezwa, saser akanyorwa uye zvichingodaro
Zvakabatanidzwa: magineti akasimba, magineti akapfava, anovhura mabhodhoro, zvikorekedzo, mabhodhi, zvinyoreso nevamwe zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi
Kurongedza: 1pc / bubble, kana kutevedzera kuraira kwako.
Pashure: Nyoro PVC Labels
Zvadaro: Yakapfava PVC Penzura Toppers
Kutonhorera kweFridge Magnets
Tsika Fridge Magnets
Akanaka Fridge Magnets
Firiji Kushongedza Magnets
Yakasarudzika Fridge Magnets
Mufananidzo Fridge Magnets